यो हो विश्वकै सबैभन्दा महँगो मोटरसाइकल : मूल्य सुनेर पत्यार नलाग्न सक्छ ! – PostKathmandu
March 11, 2018 by PostKathmandu
विश्वकै सबैभन्दा महँगो मोटरसाइकलको मूल्य कति हुन सक्ला ? १० लाख, २० लाख या ५० लाख ? होइन तपाईंलाई पत्यार नै नलाग्न सक्छ । यसको मूल्य करिब ९ करोड नेपाली रुपैयाँ पर्दछ ।
यो मोटरसाइकल हार्ले डेविडसनको हो जुन विश्वकै सबैभन्दा महँगो हो । उनले यो बाइकलाई सुनको परतबाट बनाएका हुन् ।
साधारण मानिसलाई यो महँगो लागे पछि कम्पनीको दावी छ कि धनी शौखिनहरुका लागि यो मूल्य धेरै होइन । यो बाइक डेनमार्कको लज जेनसेन कम्पनीले बनाएको हो । केही समय पहिले यो बाइक जर्मनीको हैम्बर्गमा प्रदर्शन गरिएको थियो ।
Posted in प्रवास, बिज्ञान-प्रबिधि
Prevश्रीमानको आँखा छलेर अर्कै संग सुत्दा श्रीमान टुप्लुक्क आएपछि ! अनि के भयो होला ? आफै कल्पना गर्नुहोस्
Nextभोलि सोमबार यी राशी भएकाको भाग्य चम्किने छ यी राशिको मध्यम छ (बिस्तृतमा पढ्नुहोस्)